hey, ụmụ okorobịa Hi!!! Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ n'uche gị dị ka esi ohere 192.168.0.1 IP adreesị? na Ị chọrọ ịma banyere 192.168.0.1 Banye usoro, ma ọ bụrụ na ee mgbe ahụ ị na-adịghị mkpa na-eche ma ọ bụ na-echegbu onwe ọzọ? ime ka ebe a n'isiokwu a nke m edemede, M ga-agwa gị ihe niile usoro na usoro ka ohere 192.168.0.1.
Gịnị bụ 192.168.0.1?
192.168.0.1 bụ a onwe IP address of Internet Protocol version 4 (IPv4) netwọk (Ọ na-na-mara dị ka usu adreesị na kọmputa sayensị). Ọ bụ ndabere nhazi IP address of wireless routers ma ọ bụ ADSL (Akpàràkpà Digital ụtụ magazin Line) Modem kọmputa emepụta site na ụlọ ọrụ ndị dị ka Netgear, D-Link, TP-Link, na ndị ọzọ. The management console nke ndị a routers nwere ike inweta site na ịga na 192.168.0.1 IP Address na ihe nchọgharị gị.
Olee abanye na 192.168.0.1?
➥ mbụ, Jikọọ rawụta gị Computer ma ọ bụ laptọọpụ via a Wired ma ọ bụ njikọ ikuku.
➥ Next, emeghe ọ bụla Web nchọgharị na kọmputa gị na-aka pịnye na adreesị 192.168.0.1 na nchọgharị adreesị mmanya mgbe ahụ, mgbe pịa tinye, na ị ga-ahụ nbanye page.
➥ Na peeji a, ị nwere ike tinye na ezi aha njirimara na paswọọdụ.
➥ Ọ bụrụ na ị na-echefu na amaghị rawụta si aha njirimara na paswọọdụ, mgbe biko tinye Aha ojii ma Paswọdu dị ka "Admin" na ma nke ndị ubi akpata ya bụ ndabara na aha njirimara na paswọọdụ nke kasị nke routers.
M Ike Nbanye My rawụta, Ihe a ga-eme?
Ọ bụrụ na ị dee 192.168.0.1 n'ime nchọgharị ma ọ naghị arụ ọrụ mgbe 192.168.0.1 abụghị adreesị IP gị rawụta
The ụzọ ziri ezi isi na-ahụ gị ziri ezi IP Address:
➥ Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac - Gaa Ngwa > utilities > Ọnụ. Ozugbo ị na-na na na-enweghị Ngwọta, ụdị"ipconfig" na > tinye.
➥ Ọ bụrụ na ị na-eji Windows - Gbaa a search na kọmputa gị maka iwu ozugbo (CMD) . Ozugbo iwu igbe bụ na-emeghe, ụdị "ipconfig" na > tinye.
Olee otú Nịm Up Ikuku rawụta N'ihi na oge mbụ?
➥ mbụ, jikọọ kọmputa gị gị rawụta LAN (obodo ebe netwọk) waya.
➥ Ugbu a-emeghe a nchọgharị na kọmputa gị na-abanye na https://192.168.0.1 na adreesị mmanya.
➥ Mgbe a nbanye page ga-apụta. ugbu a
➥ Ugbu a tinye ndabara na aha njirimara na paswọọdụ e dere na rawụta.
➥ Next Malitegharịa ekwentị gị rawụta na ịtọ SSID (Service Set nchọpụta) aha. Ọ ga-abụ aha gị rawụta na a ga-emere na ngwaọrụ ndị ọzọ.
➥ wee meere a paswọọdụ ke Network Nche Ntọala.
➥ Ugbu a, pịa na Next button.
➥ Reboot na rawụta otu oge ịzọpụta ntọala.
➥ Ugbu a, i nwere ike ịchọ gị wireless netwọk si Service Set nchọpụta (SSID) aha na gị na laptọọpụ ma ọ bụ ekwentị. Ugbu a Tinye paswọọdụ, na na ọ ga-jikọọ na gị rawụta na internet njikọ.
Nịm a Nbanye Password N'ihi D Link Ikuku rawụta
➥ Mbụ niile na-emeghe a nchọgharị na-abanye na https://192.168.0.1 na adreesị mmanya.
➥ Next click na mauntenance button
➥ Mgbe ahụ, pịa na Admin Button
➥ Ugbu a ịgbanwe paswọọdụ gị
➥ Mgbe na-agbanwe agbanwe paswọọdụ click on gbanwee button.
➥ Ugbu a, ị nwere ike nbanye na ọhụrụ paswọọdụ.
Echere m na ọ ga-ezu ozi banyere 192.168.0.1 Banye. M olileanya na niile iche iche nke ozi bara uru ka ị ma ọ bụrụ na ị chere ihu nsogbu ọ bụla banyere nke a post, mgbe biko ikwu anyị na anyị ga na-agbalị iji dozie nsogbu gị dị ka anya dị ka o kwere. Daalụ maka na ịga anyị na saịtị.
10.0.0.1 nbanye Admin
Previous Post:192.168.1.1 || Olee otú nbanye 192.168.1.1 IP Address?
Next Post:Gịnị bụ 192.168.0.0 IP Address?